I-NextMapping | Izindlela ezihamba phambili zabasebenzi abakude
Bona konke okuthunyelwe kwebhulogi
Senze ucwaningo oluningi lwabasebenzi bakude futhi sihlanganise imikhuba emihle yabasebenzi bakude.
Ngezindlela eziningi kube nokuvumelana okujwayelekile kokuthi lapho unyaka we-2020 usuphelile kuzoba nomqondo wokubuyela kokujwayelekile. Noma ngabe yikuphi okujwayelekile amazinga wanamuhla kuyabonakala ukuthi kunokwejwayelekile okusha okuvelile.
Sihlolisise izisebenzi ezikude ezingaphezu kuka-1000 sabuza: “Ngabe uyafuna ukubuyela emsebenzini isikhathi esigcwele lapho ubhadane lukhona?”
Ngaphezu kwabangama-90% abaphendulile bathi abafuni ukubuyela endaweni yokusebenza yangaphambi kukaCovid.
Izimpendulo zenhlolovo azange zisimangaze kithi Okulandelayo - besigxile ekuthambekeni kwezenhlalo nasekuthintekeni kwezingqondo zabasebenzi ekusaseni lomsebenzi kule minyaka eyishumi edlule.
Lapho sabelana nabaholi ngezibalo ezingenhla bayakuqinisekisa ukuthi ucwaningo lwabo lwangaphakathi lwabasebenzi lubonisa impendulo efanayo. Uma abasebenzi befuna ukuqhubeka nokusebenza ngokuqhelele kude kusho ukuthi izinkampani eziningi zidinga ukubheka kabusha amasistimu nezinsizakusebenza zazo ukuxhasa indawo yokusebenza ekude yesikhathi esizayo.
Abanye babaholi benkampani balwa nesifiso sokuthi abasebenzi basebenze kude futhi bayala ukuba kubuyelwe ehhovisi. Le ndlela ngeke isebenze kahle ngokuhamba kwesikhathi. I-genie ikhishiwe ebhodleleni futhi abasebenzi bakwazi ukufakazela ngesikhathi sikaCovid ukuthi ukusebenza ekhaya kungasebenza futhi kusebenze kahle.
Ucwaningo lwethu lukhombisa ukuthi ukubuyela emsebenzini wokusebenza kwezinkampani eziningi kuzofaka inqubomgomo esemthethweni yokusebenza ngokude. Ngaphezu kwalokho kuzoba nemodeli eyi-hybrid yomsebenzi wesilawuli kude nasemsebenzini wasehhovisi.
Umsebenzi wesilawuli kude usebenza kahle kubasebenzi abaningi futhi siphawulile ukuthi kunamaphethini ajwayelekile phakathi kwabasebenzi bakude abaphumelelayo.
Izindlela ezinhle kakhulu zabasebenzi abakude zifaka:
Kusethwe ngokusobala okulindelwe phakathi komholi nomsebenzi osebenza ngokufanele kwenziwe - yimuphi umsebenzi okufanele wenziwe, imihlahlandlela ngezikhathi ezibekiwe ukuze wenziwe nokuthi umsebenzi owenziwayo ulandelwa kanjani.
Ukuxhumana okungaguquguquki futhi okungaguquguquki kuzo zonke izindlela zokuxhumana - abasebenzi abaphumelelayo besebenzisa ingxoxo ngokusebenzisa amaqembu e-MS noma i-portal yabo eku-inthanethi, ukufinyelela i-IM kumalungu ethimba ukuze babelane ngokuthakazelisa eqenjini, ukusetshenziswa kahle kwe-imeyili nokwazi ukuthi bangayithatha nini ifoni noma ukucela ukuhlangana okungokoqobo.
Gxila emikhawulweni yomsebenzi ukugwema ukutubeka - abasebenzi bakude abaphumelelayo bayabona ukubaluleka kokushiya emsebenzini ukuze basethe kabusha futhi bagcwalise kabusha
Amandla okuzisiza ngokuzilolonga, ukuhambahamba, ukulalela umculo, ukuzindla nokucela ukuxhaswa noma usizo.
Lapho usebenza kumaphrojekthi weqembu usebenzisa indlela yokuphathwa kwephrojekthi ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uhlala exhunyiwe nokuthi imininingwane yabiwa ngokuvulekile kufaka phakathi imigqa nokulethwa.
Abaholi abaphumelelayo bakude ngenhloso yokungena kwamasonto onke nelungu ngalinye leqembu labo ukubuza ukuthi 'unjani?' nokunikeza ukwesekwa nokuqeqeshwa.
Ukuhlelela izinto eziza kuqala ngaphambi kwesonto ngalinye - Ukugxila kokuhamba phambili okungu-3 okuphezulu ngosuku - ukubeka imigomo efinyelelekayo yokwenziwa.
Ukuhlela indawo emhlophe phakathi kwemihlangano ebonakalayo - ukusetha i-buffer yemizuzu eyi-15 kuye kwengama-30 phakathi kwemihlangano kuvumela ukunwebeka, ukuhamba futhi ukuvuselela kude nezikrini.
Ukuxoxisana usuku ngalunye ngokwenza isheke esisheshayo salokho okufeziwe, yini ehambe kahle nokuthi yini abangayenza kangcono ngosuku olulandelayo (kugxile ekwenzeni ngcono okuqhubekayo).
Asikwazi ukubukela phansi 'umqondo wezisebenzi' nokuthi ulithinta kanjani ikusasa lomsebenzi. Sisezimakethe zabasebenzi okusho ukuthi abasebenzi bazimisele ukufuna umsebenzi kwenye indawo uma umqashi wabo engakwazi ukubanikeza umsebenzi wokude.
Uma sigxila ekusebenzeni okuhle kwesisebenzi esikude singakuthola ukusebenza kwendlela umsebenzi owenziwa ngayo ukude.